Blogs: ताजा फलफूल तथा तरकारी भण्डारणको घरेलु तरिका: शुन्य शक्ति शित भण्डारण!!!
ताजा फलफूल तथा तरकारी भण्डारणको घरेलु तरिका: शुन्य शक्ति शित भण्डारण!!!
फलफूल तथा तरकारीबालीहरु भिटामीन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा शक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । फलफूल तथा तरकारीबालीहरु टिपिसकेपछि पनि निरन्तर जीवन प्रक्रिया पूरा गरिरहने हुनाले यसबाट हुने वाष्पिकरण तथा श्वास प्रश्वास का कारणले गुणस्तरमा ह्रास गराउँदछ । यस्ता नियमित प्रक्रियाहरु को मात्रा र दर मुख्य रुपमा नजिकको वातावरणको तापक्रम र सापेक्षिक आद्रतामा निर्भर गर्दछ । यस अर्थमा तापक्रम र सापेक्षिक आद्रताको नियमनबाट गुणस्तरको ह्रास हुनबाट बचाउन सकिन्छ।
उदाहरणका लागि फलफूलको वाष्पीकरण हुनु भनेको यसको तौलमा कमी आउनु हो । यस अर्थमा वाष्पीकरणबाट उडेको पानीको मूल्य र वस्तुको मूल्य उही हो । तसर्थ फलफूल तथा तरकारीबालीहरु टिपिसकेपछि जतिसक्दो छिटो चिस्याउन सकियो भने यसको समग्र गुणस्तरलाई बढी भन्दा बढी कायम राख्न सकिन्छ । नेपालको परिवेशमा किराना तथा खुद्रा पसलमा बेच्नका लागि राखिने फलफूल तथा तरकारीहरुमा खुल्ला हुनेहुँदा र कुनैपनि प्रकारको भण्डारणको प्रयोग नगरिने हुँदा गुणस्तरमा दू्रततर ह्रास आउँछ । यसरी ह्रास आउनु भनेको समग्र पौष्टिक तत्वको नाश हुनु हो भने अर्कोतिर बिक्रेतालाई वजनमा पनि घाटा हुनु हो ।
Zero power cold storage technique (3)
Photo credit: http://www.kvkcard.org/
शुन्य शक्ति शित भण्डार बनाउने तरिका:
इट्टालाई करिब आधा दिन चिसो पानीले भिजाएर राख्ने ।
आफ्नो आवश्यकताअनुसारको वा सामान्यतया १ मिटर चौडाई इंट्टा बिच्छ्याउने र मसिनो शुद्ध बालुवाले सबै खाली प्वालहरु भर्ने ।
करिब पौने १ मिटर अग्लाई रहने गरी तथा चित्रमा देखाए झैं बीचमा ७ देखि १० सेन्टिमिटर खुल्ला रहने गरी इंट्टाको गारो लगाउने ।
दुईवटा गारोको बीचमा रहेको खाली स्थानमा अब सफा तथा शुद्ध बालुवाले भर्ने ।
बालुवामाथि अब बिस्तारै चिसो पानीले भिजाउने र सम्पूर्ण बालुवा नभिजेसम्म पानी राख्ने ।
माथिको खूल्ला भागलाई राम्ररी ढाक्ने गरी पराल वा खरबाट बनाइएको फरिको तयार पार्ने ।
प्लाष्टिकको क्रेटमा फलफुल तथा तरकारी राखी यसरी तयार गरिएको भण्डारमा राख्ने ।
उक्त भण्डारलाई घाम तथा पानीबाट बचाउनका लागि सानो टहरो बनाउने ।
बालुवाबाट निरन्तर पानीको वाष्पिकरण हुन दिने र हरेक दिन साँझ र बिहान चिसो पानीले बालुवा भिजाउने ।
यसरी बनाइएको भण्डारमा फलफुल तथा तरकारीबाट निस्कने इथाइलिन नामको ग्याँसलाई पूर्ण रुपमा बाहिर निकाल्नका लागि सफा हावा खेल्न सक्ने वातावरण दिने र गुम्म हुनबाट बचाउने ।
साधारणतः अग्लो स्थानमा यो भण्डार बनाएमा प्राकृतिक रुपमा नै हावा खेल्न पाउँछ । यसरी भित्री भाग जहाँ फलफूल तथा तरकारी राखिएको हुन्छ, त्यहाँको तापक्रम मौसम र स्थान अनुसार करिब ५ डिग्रीसम्म कम हुन जान्छ भने सापेक्षिक आद्रता करिब ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुन जान्छ जसले गर्दा यसरी राखिएको तरकारी सागसब्जी र फलफूल एक हप्ताको समयसम्म नओइलाइकन ताजा राख्न सकिन्छ । तर निमार्णको स्थान, बालुवाको गुणस्तर, पानीको उपलब्धता र प्रयोग आदिमा यसको प्रभावकारीता फरक पर्दछ ।